Oromiyaa keessatti hidhaan babal'achuun himame - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Dekebo Wario/Facebook
Magaalota Oromiyaa kanneen akka Naqamtee fi Shaashamannee keessatti namoonni heddumminaan mana hidhaatti guuramaa jiraachuu jiraattonni BBC'tti himaniiru.
Godina Arsii Lixaa magaalaa Kuyyaraa kan jiraatan Aadde Dinqinash Ifaa abbaan warraa isaanii Obbo Dhaqqaboo Waariyoo ilmasaanii Tasfaayee Dhaqqaboo waliin badii tokko malee humnoota nageenyaatiin manaa buutamanii mana hidhaa Shaashamanneetti akka darbaman dubbatu.
"Ani iddoo hojii deemeen ture, mana kiyya dhufanii cabsanii daa'imman kiyya tumanii hidhani" jedhu.
Abbaan ijoollee isaanii Obbo Dhaqqaboon magaalaa Shaashamanneetti qabamanii hidhamuu dubbatu.
"Mootummaan ega dhufee xiqqoo wayyoofne jennee gammannee turre, homaa wayyoo wayii hin arganne" jedhu.
Obbo Dhaqqaboo Waariyoo kanaan duras maqaa shororkeessummaatiin mana hidhaa qilinxoo buufamanii gidiraa hedduu booda bilisaan ba'uu isaanii dubbatu.
Ergasiis maqaa shororkeessummaatiin irra deddeebi'anii hidhamuun irraa hin dhaabbanne jedhu Aadde Dinqinash.
Obbo Dhaqqaboo fi ilma isaanii qofa osoo hin taane namoonni biroo hedduun naannoo isaaniitii mana hidhaatti guuramaa jiru jedhan aadde Dinqinash.
Haaluma wal-fakkaatuun magaalaa Naqamteettis Wiixata darberraa eegalee namoonni hedduun akka hidhaman jiraattonni himaniiru.
Jiraataan magaalattii maqaansaa akka himamu hin feene tokko maatii isaa keessaa maanguddoon Dhugaasaa Mangashaa jedhaman butamanii hidhamuu BBC'tti himeera.
"Gaafa Wiixataa naannoo sa'aatii 11 poolisiin Federaalaa fi loltoonni Raayyaa Ittisa Biyyaa dhufanii bakka hojii isaaniitii fuudhanii deeman" jedha.
Masaraa Kumsaa Morodaa silaa hawwata Turiistii ta'ee galii argamsiisa jennee abdannu keessatti yeroo ammaa tuuta namootaa hidhamantu argamu jedha jiraataan kun.
Buufataalee biroo namoonni itti hidhamanii jiran kanneen akka buufata 05 fi 07 keesatti namoota hidhaman gaafachuun yoo danda'amellee, kan warra Kumsaa Morodaatti hidhamanii jiranii maatiinuu gaafachuu hin dandeenye jedha.
Maaliif akka hidhamanis hanga yoonaa wanti beeknu hin jiru jedha.
Oromiyaa bakka adda addaatti namoonni hidhamaa jiraachuun sirriidha kan jedhan qondaalli Biiroo Bulchiinsaa fi Nageenyaa Oromiyaa komiishinar Qana'aan, kaayyoon jiru olaantummaa seeraa mirkaneessuudha jedhan.
Kunimmoo kan ta'uu danda'u "namoota seeraan ala deemanii fi kanneen shakkaman seeratti dhiyeessuudhaani, nutis kana gochaa jirra" jedhan.
Uummanni olaantummaan seeraa akka kabajamuu mootummaa gaafataa jira kan jedhan komiishinar Qana'aan, hojiin hojjetamaa jiru "namoota nageenya uummataa booressan, yakka adda addaa keessatti qooda qaban seeratti dhiyeessuudha" jedhu.
Yaalii fonqolchaan wal-qabataa?
Yeroo ammaa tarkaanfiin namoota hidhuudhaan fudhatamaa jiru kun namoota jijjiirama dhufaa jiru kana teellaatti deebisuu fedhan qolachuurratti kan fuulleffateedha jedhu.
Tarkaanfiin fudhatamaa jiru 'yaalii fonqolcha mootummaa' Sambata darbe raawwate ilaacha keessa galcheeti jedhan.
Fonqolchichi naannoo Amaaraa keessatti yaalame haa jedhamu malee galmi isaa jijjiirama eegalame duubatti deebisuudha kan jedhan aanga'aan kun, tarkaanfiin fudhatamaa jiru namoota sana keessatti qooda qabanis ni dabalata jedhan.
Yaaliin fonqolchaa kun mootummaan gara laafummaa fi obsa hin malle agarsiisee, dursee tarkaanfii fudhachuu dhabuu isaatiin kan dhufe jedhu namooti siyaasaa fi xiinxaltoonni.
"Gara laafinsi mootummaa namoonni wantoota biraa keessa akka galan taasiseera, namoota kanneen adda baasanii seeratti dhiyeessuun dirqama ta'a" jedhu siyaasaa Itoophiyaa irratti kan dubbatan Dr Birhaanuu Leenjisoo.
Kana keessa garuu namoota yakka tokkollee hin hojjetiin walitti qabanii hidhuurraa mootummaan of qusachuu qaba jedhu.
Nami siyaasaa gameessi Obbo Leencoo Lataa garuu mootummaan akkuma kanaan dura gochaa ture obsaa fi gara laafummaan dubbii ilaaluu itti fufuu qaba jedhu.
""Uleen gadi baanaan eenyu akka hubamu hin beekamu, kun dhibdee biraa ta'a" jedhu.